Georgina Rodriguez oo Ooyin jabsatay kaddib Saddexleydii uu xalay ka kacay Gacaliyaheeda iyadoona u soo qortay Fariintan!! – Gool FM
Georgina Rodriguez oo Ooyin jabsatay kaddib Saddexleydii uu xalay ka kacay Gacaliyaheeda iyadoona u soo qortay Fariintan!!
(Europe) 13 Maarso 2019. Georgina Rodriguez ayaa ooyin jabsatay kaddib markii uu Saddexleey ka kacay gacaliyaheeda Cristiano Ronaldo ciyaatii xalay ay Juventus 3-0 uga adkaatay Atletico Madrid uguna soo gudbtay wareega sidee dhammaadka Champions League.
Kaamirooyinka TV yada ayaa soo qabtay Georgina oo farxad la oynaysa kaddib markii uu Ronaldo dhaliyay goolka saddexaad.
Ciyaarta kaddib ayay Georgina Rodriguez baraha bulshada soo dhigtay sawirka Ronaldo oo yar iyadoona soo raacisay fariin qiiro leh:
“Cid ma xadi karto 3-0 tan. waad u qalantaa, ma ahan oo kaliya saddexda gool ee caawa.
“Waxaad ku muteysatay naf huristaada iyo dhabar adeegaaga.
“Mashiin ayaad u tahay saaxiibadaada kooxda, tababaraha iyo qof kasta waan kaa helnaa waana ku taageernaa maalin kasta, maxaa yeelay adiga ayaa leh adduunka kubbada cagta. WAAN KU JECEL NAHAY.”.
Mushaarka uu Zidane ka qaadan doono Real Madrid oo shaaca laga qaaday